Filim Laga Sameeyay Jacayl Dhex Maray Maxbuus Ku Xidhan Guantanamo Bay Iyo Askariyad Maraykan Ah | Hawraar
Filim Laga Sameeyay Jacayl Dhex Maray Maxbuus Ku Xidhan Guantanamo Bay Iyo Askariyad Maraykan Ah
Filim cusub oo muran iyo dood badan ka dhaliyay dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu soo baxo todobaadka soo socda, kaas oo uu soo saare ama Director ka yahay, rug cadaaga aadka looga dhex yaqaano Hollywood ee Peter Sattler.
Sida wakaaladaha wararka dunida intooda badani ku warameen, filimkan ayaa qisadiisa laga sameeyay, jacayl aad u sareeya oo dhex maray lamaane kala waayo durugsan, balse isku quluub ah, kaas oo ilaa heerka uu gaadhay lagu tilmaamay inuu xuduudaha siyaadeed iyo juqraafi ka talaabay.
Filimkan oo loogu magac daray, “Camp X-Ray), ayaa laga alifay qisada Maxbuus ku xidhan xabsiga Guatanamo Bay iyo Askariyad Maraykan ah, oo ka mid ah ilaalada xabsigaas, waxaana sida qisadu warinayso lamaanahani noqdeen kuwo indhaha aan laga qarsan Karin xaaladooda iyo heerka jacaylkoodu gaadhsiisan yahay.
In kasta oo ay noqonayso markii ugu horaysay ee filim laga matalo, xabsiga sumcada xun ee Maraykanku, u taxaabay Islaamiyiin boqolaal tiradoodu gaadhayso, jidh dil iyo tacadiyada ugu xun dunidana la marsiiyay, qisada jacaylka ah ee dhex martay askariyada Maraykanka ah iyo maxbuuska xabsigaasi waa mid waji kale u yeelaysa xaaladaha dhabbta ah ee xabsigaas ka jira.
Sida wararku sheegeen waxa lagu wada in 17-ka bishan October ee aynu ku jirno qaybaha ugu horeeya ee filimkaas la soo bandhigi doono, waxaana sida la warinayo filimkan aktar ka ah, Jilaaga caalamiga ah ee reer Iiraan, Bayman Mahdi, kaas oo isagu hore u matalay filimkii Iiraaniga ahaa ee “A Separation” .
Filimka Payman Mahdi ee “A Separation” waxa uu ku guulaystay abaal marinta caalamiga ah ee Oscar-ka, 2011-kii wakhtigaas oo loo aqoonsaday, filimkii ugu fiicnaa ee Ajaanib ama dibada Maraykanka lagu matalo.
Mahdi ayaa filimkan “Camp X-Ray” ku matali doona Ali oo ah magaca Maxbuuska ay is jeclaadeen, Askariyada Maraykanka ah, waxa filimkan ku jira, wararkii luuqada carabiga ku baxay, ee weeraradii 11-September 2001-kii laga baahiyay burburkii daarihii mataanaha ahaa ee New York.